तपाईले टोकियोको पछिल्लो तस्विर हेर्नु भएको छ ? यहाँका गगनचुम्बी भवनहरु त देख्नु भएकै होला । तपाईले अंग्रेजी फिल्म द लाष्ट सामुराईमा देखे जस्तो सबै जापानीहरु काठकै घरमा बस्दैनन् । पछिल्लो समय इटा, स्टिल र कंक्रिटका घरहरु बनाउने क्रम बढेको छ । यसको अर्थ जापानमा काठको घर नै छैन भन्ने चाँहि होइन । अधिकांश घरहरुमा परम्परागत घरका विशेषताहरु तातामी कोठा, फुसुमास भने पाइन्छ ।
हो उनीहरुले भात खान्छन् । तर भात मात्रै खाँदैनन् । यसको साथमा अन्य धेरै खानेकुरा पनि खान्छन् । चाउचाउ, पाउरोटीदेखि सुशीसम्म अनि चिप्सदेखि स्पागेटीसम्म जापानीहरुले खाने परिकारको सूचि निकै लामो छ । तर जापानमा मानिसहरुले स्यान्डविच भन्दा धेरै ओनिगिरी राइस बल खान्छन् अनि सामान्य खालका पाउरोटी भन्दा धेरै चामलको पाउरोटी खान्छन् । जापान चामल धेरै खपत गर्ने देश हो । यसमा भने कहिले पनि परिवर्तन नआउला । तर यसो भन्दैमा जापानीहरुलाई भातप्रेमी भन्न मिल्छ त ?
जापानीहरु मरिहत्ते गरेर काम गर्ने भएपछि सबै जना अति नै धनी छन् भन्ने तर्क आएको हुन सक्छ । अब तथ्यांकमा हेरौं । जापानमा औसत कलेज ग्र्याजुएटले पहिलो रोजगारीबाट करीब १ हजार ८०० देखि २ हजार २०० डलर कमाउँछन् । करार स्थायी हुन्छ । त्यसैले जीवनभर अर्को जागिर खोज्ने चिन्ता हुँदैन । मासिक १ हजार ८०० देखि २ हजार २०० डलर भनेको कति हो ? यो धेरै होइन । तर तल्लो तहका कर्मचारीका लागि अन्य देशमा दिइने तलवको तुलनामा चाँहि यो राम्रै हो । अधिकांश जापानी कम्पनीहरुले ३० वर्ष नपुग्दासम्म ‘डोर्म’को सुविधा दिन्छन् । कामदारहरुको यात्रा खर्च पनि कम्पनीले पुनः फिर्ता दिन्छ । हरेक ६ महीनामा तलबको मूल्यांकन र वृद्धि पनि हुन्छ । हिसाब गर्ने हो भने ३० वर्ष पुग्दा औसत जापानीहरुको मासिक तलब करीब ४ देखि ५ हजार डलरसम्म हुन्छ । यो पक्कै पनि थोरै पैसा होइन ।
जापान र चीन दुई फरक फरक देश हुन् । लेख्ने प्रणाली, भाषा र संस्कृति पनि विल्कुल फरक छन् । यी दुबै भाषमा मिल्ने एउटै कुरा भनेको खान्जी हो । यी दुईबीच पनि निकै भिन्नता छ । एउटा जापानी वयस्कले ६० प्रतिशत मात्रै चिनियाँ लिखित बुझ्न सक्छ ।
Prevनियमित र करारका कर्मचारीबीच के भिन्नता छ ? करारको कर्मचारीका रुपमा काम गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
Nextजापानी पासपोर्ट विश्वकै शक्तिशाली